Iingcebiso ezili-9 zokwenza imiboniso yePowerPoint esebenzayo | Martech Zone
Iingcebiso ezili-9 zokwenza imiboniso yePowerPoint esebenzayo
Lwesine, Matshi 17, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ndilungiselela umboniso endiwenzayo malunga neeveki ezisi-7 ukusukela ngoku. Ngelixa ezinye izithethi endizaziyo ziya kuphinda-phinda intetho engapheliyo, intetho zam zihlala zibonakala zisebenza kakuhle xa mna lungise, zenzele, ku sebenza kwaye ogqibeleleyo Kude kudala ngaphambi komsitho.
Injongo yam ayikokuyalela into esesikrinini, kukuyila izilayidi ezimangalisayo ezisebenza ngokuhambelana nentetho. Oku kwandisa kokubini ukuqonda kunye nenkumbulo. Kuba phantse isiqingatha sabantu sikhetha ukuya kugqirha wamazinyo kunokuhlala kumboniso, ndihlala ndizimisele ukuphinda ndihlekise!
Ngokutsho Uphando olutsha lwePrezi, Iipesenti ezingama-70 zabantu baseMelika abaqeshiweyo abathi banike imiboniso bathi izakhono zokubonisa zibalulekile kwimpumelelo yabo emsebenzini
I-Clémence Lepers inceda amashishini ukuba akhe iindawo zokukhaba, ezokukhaba iesile ezinyanzela kwaye zivale ukuthengisa ngakumbi. Ubeke ndawonye le infographic ye Iingcebiso ezili-9 zokwenza iNtshumayelo esebenzayo:
Yazi abaphulaphuli bakho - Ngobani? Kutheni belapho? Kutheni bekhathalela nje? Yintoni abayifunayo kwaye bayayifuna?
Chaza iinjongo zakho -Qiniseka ukuba zi-SMART = ezithile, zinokulinganiswa, ziyafezekiseka, ziyinyani kwaye ziqhutywa lixesha.
Uyila uMyalezo oNyanzelayo -Yigcine ilula, ikhonkrithi, inokuthenjwa, kwaye iluncedo.
Yenza ulwandlalo -Qala ngentshayelelo yokuba kutheni abantu bekhathalela, bachaze izibonelelo, baxhase umyalezo wakho ngezibakala, gcina umyalezo omncinci kwisilayidi ngasinye, kwaye uphele ngomnxeba othile.
Hlela iiSilayidi Elements Sebenzisa ubungakanani befonti, iimilo, umahluko kunye nombala ukwenza umbono.
Yakha umxholo -Khetha imibala kunye neefonti ezimele wena, inkampani yakho kunye nesimo sakho. Sizama ukwenza uphawu kwiintetho zethu ezinje ngendawo yethu ukuze kubekho ukwamkelwa.
Sebenzisa izinto ezibonakalayo -40% yabantu baya kuphendula ngcono kwizinto ezibonakalayo kwaye i-65% igcine ulwazi ngcono ngokubonakalayo.
Hook abaphulaphuli bakho ngokukhawuleza -Imizuzu emi-5 ngumndilili wokujongwa kwengqwalaselo kwaye abaphulaphuli bakho abayi kusikhumbula isiqingatha sento oyikhankanyileyo. Enye impazamo endandihlala ndiyenza kwangethuba yayikukuthetha ngeziqinisekiso zam ...
Linganisa ukusebenza ngokukuko -Ndinikela ingqalelo kwangoko emva kwentetho yam ukuba bangaphi abantu abanqwenela ukuthetha nam. Amakhadi amashishini amaninzi, ngcono ukusebenza kwam! Kuba abantu bahamba ngeselula, ndiyabakhuthaza ukuba bandithumelele umyalezo ukuze ndibhalise kwincwadana yam (bhala UKUTHENGISA ukuya ku-71813).
Ekugqibeleni, ishishini eliveliswe kwangoko kubaphulaphuli okanye kwinethiwekhi ekubhekisa kuyo iya kubonisa ukuba uphumelele kangakanani. Ukuphinda umenywe ekuthetheni kuhlala kukudibanisa, nako!
tags: Abafani beClémenceiingcebiso ezifanelekileyo zokubonisakwi-infographicIingcebiso eziphambili zokubonisaiingcebiso eziphambiliipowographic infographic yamandlaiingcebiso zokubonisa ngamandlaiingcebiso zombaneipppopintetho infographiciingcebiso zokubonisaiingcebiso zokubonisa infographicbonisapreziNdithatha
Benza njani abathengisi ukuba bafumane imali ngoMatshi?
Agasti 11, 2016 ngo-6: 01 PM
Sebenzisa ukubonwa okusebenzayo ngokuqinisekileyo kuya kugcina abaphulaphuli bakho benomdla. Kodwa qiniseka ukuba awusebenzisi kakubi! Banokuphazamiseka ukuba baninzi kakhulu. Enkosi ngokwabelana ngeengcebiso.